Fanohanana, Tolerany ary Famerenana | Reef Resilience
Raha misy vatohara maromaro mifandray amin'ny toe-javatra mampihorohoro izay fantatra fa miteraka fahamendrehana, dia misy fiantraikany amin'ny toetr'andro telo ny toetra voajanahary:
Manjavozavo izay mety hiantehan'ny vatohara avo lentam-peo avo tsy misy fery (fanoherana)
Ny fahalasanan'ny valan-javaboary ho tafavoaka velona (fandeferana)
Ny fahafahan'ireo vondrom-piarahamonina haranina hovelarina (famerenana) dia tokony hitranga ny fahafatesan'ny vatohara manan-danja
Ny toetoetra ara-tontolo iainana telo dia mamaritra ny vokatry ny haintany ho an'ny vatoharan-dranomasina: ny fanamafisana ny fivalozana, ny fandeferana ny vatohara ary ny fitrandrahana amin'ny vatohara. Ankoatr'izay, ny fahaiza-manaon'ny fahafaha-manaon'ny olona dia mety hisy fiantraikany amin'ny faharetan'ny haran-dranomasina koa. Ny tsirairay amin'izy ireo dia voavolavolan'ny anton-javatra maromaro izay mamaritra ny fahalemena na ny vulnerability amin'ny rafitra. Kitiho raha hanitarana. Sary © Marshall sy Schuttenberg 2006, natokana ho an'ny Obura 2005
Ny fahatakarana ireo toetra ireo sy ny antony mahatonga azy ireo dia afaka mampahafantatra ny fitantanana fitantanam-bola izay mikendry ny hampitombo ny faharetan'ny vatohara amin'ny fiovan'ny toetr'andro.
Ny fiovaovan'ny toetr'andro dia manondro zava-misy manan-danja: ny vatohara tsirairay miovaova amin'ny valin-dalany mivelatra mba hamirapiratra sy hitera-doza. Ny fihanaky ny fihenan'ny valin-dabozia dia hita ao anatin'ny kolonely tsirairay, amin'ny kolontsaina mitovy karazana, ary amin'ny karazana samy hafa. Ireo fiovàna ara-toekarena ireo dia mampivelatra kokoa ny lamina ara-tontolo iainana, ka ny karazana mitovy karazana dia matetika maneho ny valin-teny miverimberina amin'ny toerana samihafa. Ireo lamandy ireo dia voamarina amin'ny mizana manomboka amin'ny metatra ka hatramin'ny kilometatra an'arivony. Ny sasantsasany amin'ireo singa izay mitarika ny valinteny momba ny haran-dranomasina dia:
Ny mari-panaon'ny hafanan'ny ranomasina, indrindra amin'ny mizana lehibe
Ny fahasamihafana eo amin'ny faritra sy ny toerana eo amin'ny toetrandro
Manakaiky ny fananganana rano mafana
Rano sy fitondra-drano
Ny maha-taranaky ny vatohara
Fahaiza-manavakavaka eo amin'ny zooxanthellae
Fahamendrehana tosika ao an-toerana noho ny asan'ny olombelona
Ny fitrandrahana maharitra amin'ny fivalozana dia miankina amin'ny fandraisana mpiasa lava avy amin'ny lohasaha. Sary © S. Wear
Ho an'ireo vatohara izay tafavoaka velona amin'ny hetsika marevaka, dia misy ny toetra mampiavaka ny fiverenan'ny fiaraha-monina haran-dranomasina mahasalama:
Foto-pivoaran'ny hainteny: Ny henjana amin'ny hain-trano dia misy fiantraikany raha mihena ny zooxanthellae ny haran-dranomasina ho valin'ny tsindry amin'ny hafanana ary koa ny fiantraikan'ny zooxanthellae very.
Valim-panadinana immune: Ny tsy fahampian'ny hery fiarovan'ny hery fiarovana dia tsy afaka ny hiady aretina. Satria ny haran-dranomasina dia malemy noho ny hain-trano mivalona, ​​mety hanjavona ny fahaizany mamolavola sy miady amin'ny aretina.
Fanitsiana metabolika: Ny faharetan'ny haran-dranomasina dia mety miankina amin'ny anjara fahaiza-manao samihafa ny vatohara sasany mba hampiakatra ny mari-pamantarana hafiriana.
Ireo vatohara izay mijaly noho ny fahasimban-javatra maro dia miatrika fanamby maro isan-karazany noho ireo izay ahitan'ny ankamaroan'ny vatohara ho tafavoaka velona amin'ny hetsika hafahafa. Ny fahasamihafana lehibe indrindra dia ny filàna fotoana lava lava indrindra mandra-piverina amin'ny rafitra manga-nify. Hafiriana no ilàna fiarahamonin'ny haran-dranomasina mba hialàna amin'ny rijan-tany mahafaty mifandraika dia miankina amin'ny karazan-javatra isan-karazany, ao anatin'izany:
Lahatsary: ​​Fifandraisana sy famerenana (2: 20)
David Obura dia miresaka momba ny fifandraisana sy ny fanarenana ireo vondrom-piarahamonina coral.
Fepetra fampiasana tsara: Anisan'izany ny kalitaon'ny rano, ny fantson-drakitra henjana, ny fisian'ny alika mangatsiaka (manolotra fantsom-pitaterana sy tsipika ara-tsimia mba hanamorana ny fametrahana ny haran-dranomasina), ary ny fahasalamana herbivore populations.
Larv supply: Na inona na inona tsara pifidianana dia (ohatra, ny famatsian-drano, ny ateraky ny herbivore manan-danja), ny vatohara dia mitaky ny famatsian-tsakafo matavy avy amin'ny vatohara ho sitrana aorian'ny fisehoan-javatra mahakivy.
fifandraisana: Ny vatohara miorim-piainana ambony aorian'ny fanala dia miankina amin'ny fifandraisana ho an'ny loharano hafa amin'ny vatohara miaina amin'ny famolahana indray. Ohatra, mety ho an'ny vatohara ahazoana maromaro maromaro avy amin'ny vatoharan-dranomasina hafa mba hibahana ao anatin'ny fotoana fohy (~ 10 taona), raha toa ka Ny fepetra fandraisana mpiasa dia tsara.
ka feno vilona: Raha manan-danja herbivores dia tsy ampy, ny alahelon'ny alga dia mety hampiadana ny fialana amin'ny vatohara amin'ny alàlan'ny fakana toerana izay mety ho an'ny fisorohana ny vatohara.
Fifidianana voajanahary: Ny fanarenana ny vatohara ho an'ny vatohara dia mety hanamora ny fametrahana ny lavanila avy amin'ireo kilaometatra eo akaiky eo, izay miha-matanjaka kokoa noho ny hafanana mangatsiaka. Rehefa nandeha ny fotoana, dia mety ho lasa karazana hafahafa izay mampitombo ny isan'ny fizarazarana ao amin'ny toeram-ponenana izay natsangan'ny karazana hafa.
Synergistic effects: Ireo toe-javatra tsy noheverina ho manan-danja ho an'ny faharetana, toy ny famerenana indray ny vatan'ny olona, ​​ny fahaiza-manaon'ny fifaninanana amin'ny vatohara, ny fiatombohan'ny vanin-taolana amin'ny alàlan'ny famokarana ala, ny fiarovana azo avy amin'ny rafitra fiarovana ny tontolo iainana mahomby, ary ny vokatra azo avy amin'ny rano, amin'ny fanarenana ny vatohara haingana. ref